आलोपालो प्रधानमन्त्रीसहित यस्ता छन् देउवा–ओलीबीचको सहमति, सभामुख हटाउने प्रस्ताव दर्ता ! - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
आलोपालो प्रधानमन्त्रीसहित यस्ता छन् देउवा–ओलीबीचको सहमति, सभामुख हटाउने प्रस्ताव दर्ता !
प्रकाशित मिति : २०७८ फाल्गुन १३, शुक्रबार
काठमाडौं । एमसीसी परियोजनाका कारण सत्ता गठबन्धन भत्कने निश्चित भएको छ । संसदमा एमसीसी टेबल भएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने नैतिक दबाबमा रहेका छन् ।
उनीहरुले कि त एमसीसीको पक्षमा उभिनुपर्ने, हैन भने सरकारबाट बाहिरिने विकल्प लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एमसीसीको पक्षमा उभिनका लागि पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई नैतिकताले दिँदैन । किनभने उनीहरुले पहिलेदेखि नै एमसीसीको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा एमसीसी पास गर्न प्रचण्ड र माधव नेपालले साथ नदिने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ खोजेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष ओली लगातारको छलफलमा व्यस्त भएका छन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार एमालेले काँग्रेससँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसमा देउवाले सहमति जनाइसकेको बुझिएको छ । देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउन चाहेका छन् ।
स्थानीय चुनाव देउवाले गरेपछि प्रतिनिधि सभाको चुनाव ओलीले गराउने गरी प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने बारे समेत कुराकानी भएको बुझिएको छ ।
यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव कुनैपनि बेला आउने सम्भावनासमेत बढेको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति बनेमा सभामुख सापकोटालाई हटाउने गरी एक तिहाई सांसदको समर्थनसहित प्रस्ताव दर्ता हुने अवस्था बनेको हो ।
एमालेले एमसीसीमा साथ दिने भन्दै काँग्रेससँग शर्त अगाडि सारेको छ । जसमध्ये सभामुखबाट सापकोटाको बर्हिगमन प्राथमिकतामा छ ।
माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद हटाउने सूचना प्रतिनिधि सभाबाट टाँस्नुपर्नेसहित सत्ता साझेदारीको विषय पनि सर्त छन् । त्यसबारे काँग्रेस सकारात्मक भएको बुझिएको छ ।
यस्तै सहमति बनेमा एमसीसीमा समर्थन गर्न एमाले तयार भएको स्रोतले जनाएको छ । उसले सभामुख सापकोटाको बर्हिगमनको विषय राखेकोमा काँग्रेस पनि सकारात्मक भएको बुझिएको छ । यसकारण कुनैपनि बेला सापकोटा हटाउने प्रस्ताव जान सक्छ ।
सभामुख हटाउन दुई तिहाई चाहिन्छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, जसपाको मत एकीकृत भएमा दुई तिहाई पुग्छ । तर, त्यो कठिन छ ।